Training Programme | Golden Zaneka Public Co.,LTD
1. Live formal lectures,
2. Case based presentations,
3. Hands on skill training,
4. Observation in Emergency Departments,
5. Assessment of candidates,
6. Case studies from the show ” ER”
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများတွင် Care Giver တစ်ဦးအနေနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါအရည်အချင်းရှိသူများ အလိုရှိပါသည်။(၁) ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ
(၁) မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများအတွက် နည်းပညာသစ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်
(၂) ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သူနာပြု တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုပါသလား?
၂။ Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမှတ် ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ သွား/ဆေးတက္ကသိုလ် အနီး၊ သစ်စက်မှတ်တိုင်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ဖုန်း- ၀၁-၈၅၅၀၆၀၈